Madaxwayne Biixi oo Waraysi Radio Sweden ah kaga Hadlay Wadahadalada Somaliland iyo Soomaliya iyo waxyaabaha Hortaagan | Somaliland Mirror
Home WARARKA Madaxwayne Biixi oo Waraysi Radio Sweden ah kaga Hadlay Wadahadalada Somaliland iyo Soomaliya iyo waxyaabaha Hortaagan
Madaxwayne Biixi oo Waraysi Radio Sweden ah kaga Hadlay Wadahadalada Somaliland iyo Soomaliya iyo waxyaabaha Hortaagan
adminFeb 24, 2020WARARKA0
Rajo ayaa ka soo bidhaantay kolkii ay markii ugu horreeysay dalka Itoobiya ku kulmeen madax weeyneyaasha Soomaaliya iyo dawladda iyadu ku dhawaaqday inay ka go’day ee Somaliland.
Madax wayne Muuse Biixi ayaa warreeysi gaar ah oo uu siiyay laanta wararka Ekot ku sheegay inuu dalka Sweden ka mid yahay waddammada daneeynaya inuu gacan ka geeysto wada hadallada nabadda ee labada dhinac.
– Lixdii sannadood ee ugu dambeeyey ayey waddammo dhowr ihi isku dayeen sidii ey noo dhex dhexaadin lahaayeen. Dawladda Turkiga ayaa ku guuldarreeysatay, balse weli jecel inay mar kale isku daydo. Dalka Swden ayaa sidoo kale muujiyay xiise uu ku doonayo inuu gacan ka geeysto sidii ey labada dhinac isugu soo dhowaan lahaayeen.
Somaliland oo uu caalamku weli u aqoonsan yahay inay tahay qeyb ka mid ah Soomaaliya, maadaama aan weli la aqoonsan ayaa 30-kii sannadood e ugu dambeeyey gooni u taagnayd, halkaasina oo uu ka jiray baarlamaan iyo lacag u gaar ah, wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya ee 1991, markaasina oo ay ku dhawaaqday inay ka go’day dalka intiisa kale.
Wixii muddadaasi ka dambeeyay ayay Soomaaliya sheeganeeysay inay doonayso sidii ey dib isugu iman lahaayeen Somaliland, hase yeeshee uu maamulka halkaasi ka jiraa diiddanaa, welina diiddan yahay.
Dawladaha caalamka ee daneeya arrimmaha Soomaaliya ayaa yiraahda in marka hore la sugo inta ay nabadi ka dhalaneeyso Soomaaliya, oo markaa dabadeed laga wada xaajoodo in Somaliland go’do iyo in kale, ayuu sheegay madaxweeyne Muuse Biixi.
-Mana ahan caddaalad in nalagu xidho dagaalada ka taagan Soomaaliya, sida uu sheegay Muuse Biixi, isagoona ula jeeda dhibaatooyinka ururka argagixisada ee Al-Shabaab ka geeysto Soomaaliya.
Qoraal ay wasaaradda arrimmaha dibadda Sweden soo gaadhsiisay laanta wararka Ekot ayey ku soo qoreen ”In Sweden mar walba diyaar u tahay sidii ay gacan uga geeysan lahayd howlaha wadahadalka iyo heshiisiinta. Hase yeeshee aanu dalkani diyaar u ahayn inuu kaalin horseed ah ka qaato wada hadalka labada garab.”
Previous PostAuto DrRaysal Wasaaraha Dalka Malaysia Oo Is-casilaad Gudbiyay.aft Next PostAbiy's Bid to mediate between Somaliland and Somalia Hits a Wall